Global Voices teny Malagasy » Namaloka ny sehatra ara-kolontsaina niroborobo tao Hong Kong ny fikatonana tamin’ny mpanoratra tantara foronina mpisinta-kevitra iray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Janoary 2019 16:29 GMT 1	 · Mpanoratra James Durston Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Shina, Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Haisoratra, Mediam-bahoaka, Politika, Tantara, Zavakanto & Kolontsaina
Nivadika ho politika ny tantara noforonina tamin'ny filoha shinoa Xi Jinping ary nofariparitan'ny mpamoaka boky Penguin Books ho “tsindrom-paingiotra fanesoana ny totalitarianisma (tsy refesimandidy) mampiseho izay mitranga amin'ny firenena iray rehefa jamban'ny materialisma sy tantanina amin'ny herisetra sy ny lainga.” Ny endriky ny boky amin'ny teny shinoa dia hivoaka ao Taiwan  amin'ny taona 2019.
Tsy nahita mpamoaka boky tao Hong Kong i Ma, saingy tsy atao mahagaga izany. Tamin'ny taona 2015, mpivaro-boky dimy tao Hong Kong no nanjavona  ary avy eo hita fa nohazonin'ny manampahefana shinoa. Mbola voatazona hatramin'izao fotoana izao  ny iray amin'ireo mpivaro-bokyireo, araka ny nolazain'ny Amnesty International. Fantatra tamin'ny nitondrany boky izay misahana lohahevitra saropady ara-politika izy dimy ireo.
Roa andro mialoha ny tokony hitenenan'ny Ma ao Hong Kong, nilazana ny hanova ny toerana iresahan'i Ma ny mpikarakara ny fetibe ary nasaina hanafoana ny famandrihana  ny Tai Kwun, toeram-pilanonana fanaovana zavakanto sy kolontsaina vao noavaozina.
Avy eo anefa novaina indray ny fanapahan-kevitra  hanafoana noho ny fahatezerana iraisampirenena, niteraka fanontaniana tamin'ny olona maro amin'ny hoavin'ny kolontsaina sy ny literatiora ao Hong Kong ny fikasana hanilika an'i Ma tsy ho eo amin'ny lanonana ara-literatiora lehibe indrindra ao Hong Kong.
Namoaka matoandahatsoratra mametraka ny fihetsiky ny tompon'ny toerana anaovana ny lanonana ho “fihetsika fanivanantena”  ny The South China Morning Post, mpamoaka boky aman-taratasy amin'ny teny anglisy lehibe indrindra ao Hong Kong:
Tamin'ny tsingerintaona faha-20 niverenan'i Hong Kong ho an'i Shina  (avy amin'ny fanapahana britanika), nambaran'ny Filoha Xi Jinping ny “tsipika mena”  manakana izay mety ho fampieriteretana mankany amin'ny fahaleovantenan'i Hong Kong. Hita ankehitriny fa manakana izay rehetra mety ho endrika fizakantenan'i Hong Kong izany tsipika mena izany.
Eny fa na dia ny mampiatrano resaka momba ny fahaleovantenan'i Hong Kong  karakarain'ny Foreign Correspondents’ Club [klioban'ny vahiny solontenan-gazety] dia efa hita ho nanitsaka izany tsipika mena izany. Victor Mallet, tale lefitry ny FCC, moa efa tratran'ny fandavana visa hiasana  ary voarara  tsy hahazo hiditra an'i Hong Kong ho toy ny mpizaha tany.
Nisioka  i Amy Qin, izay mitati-baovao avy ao Hong Kong ho an'ny The New York Times : “Hita fa tsy misy andro tsy ahitana porofo vaovao amin'ny fihenan'ny fiarovana ny fahalalaham-pitenenana haingana dia haingana ao Hong Kong.”
Efa hatry ny ela i Hong Kong no toeram-pialofan'ny mpanoratra avy ao Shina tanibe. Rehefa nandresy tamin'ny ady an-trano ny Antoko Komonista Shinoa tamin'ny taona 1949 ary nanangana ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Shina, dia maro tamin'ireo mpanoratra no nitsoka nankany Hong Kong  ary nanori-ponenana tao amin'ny zanatany. Tao ry zareo no nanomboka ny “literatioran-tsesitany” nireharehan'ny tanàna, izay anisany mampiavaka ara-kolontsaina an'i Hong Kong.
Ohatra roa miavaka amin'izany ny mpanao tantara foronina Louis Cha sy ny mpanatontosa sarimihetsika Raymond Chow — olomanga ara-kolontsaina an'i Hong Kong nodimandry tao anatin'ny roa herinandro — narehitry ry zareo ny jiron'ny fahalalahana sitrahin'i Hong Kong, tsy toy izany kosa ny ao amin'ny tanibe. Nifindra nankany Hong Kong i Cha tamin'ny taona 1949  handositra ny fanafihan'ny komonista tao Shina, ary afa-nampiroborobo ny fahalalahana eoho eo ihany azo nisitrahana tao. Mitovitovy amin'izany ihany koa, Nifindramonina tany Hong Kong i Chow tany am-piandohan'ny taompolo 1950s ary nitondra ny mitovitovy amin'i Bruce Lee ho an'izao tontolo izao.
Ao anatin'izany toe-javatra izany, manova tanteraka ny rivotra artistika ao Hong kong ny fanafoanana lanonana tahaka itony. Nanafoana ny fanombohana fampirantiana mandeha singany  tao Hong Kong tany am-piandohan'ny volana novambra ilay mpanao tantara an-tsary Shinoa-Aostraliana Badiucao, izay manavatsava ny fihoara-pahefana ny asany ary mbola tazonina tsiambaratelo ny mombamomba azy taorian'ny nilazany ho “fandrahonana” avy any Shina.
“Tena ankamamiako tokoa ireo artista sy mpisintaka mahasahy manao izao ankarihary. Mahita ny tenako ho kanosa aho amin'izao,” hoy izy tamin'ny Hong Kong Free Press  herinandro talohan'ny fanafoanana ny fampirantiana. Nasehony ihany koa ny ahiahiny amin'ny tsy fahavitan'ny tanàna miaro ireo artista mampiadihevitra ao aminy: “Mihevitra aho fa vavolombelon'ny fahafatesan'i Hong Kong tsikelikely isika.”
Nitatra nankany amin'ireo filma ara-barotra sy ny indostirian'ny hira ihany koa ireo “fitsipika’ vaovaon'i” Hong Kong ireo. Nanjavona tsy hita tany amin'ny teathra  ireo sarimihetsika mitsikera ny fanapahana komonista na dia mandeha be ara-barotra aza izy ireny, raha voarara any amin'i Shina Tanibe ny hafa.
Mandritra izany fotoana izany ilay mpihira pop (Kantôney) malaza Denise tsy nahazo fanohanana ara-bola avy amin'ny Lancome rehefa fantatra fa nanohana ny revolisiona elo tamin'ny taona 2014 , hetsi-panoherana notarihan'ny mpianatra izay nahitana mpanao fihetsiketsehana an'aliny nibodo ny lalamben'i Hong Kong nandritra ny volana maro, nitaky fifidianana demaokratika tena izy.
“Betsaka ny siosion-dresaka amin'izay azo sy tsy azo atao. Psikôlôjika kokoa tsipika mena nosoritana mba hampisy tahotra, amin'izay ianao ihany no manivana ny tenanao,” Sampson Wong, artista sady mpampianatra ambony ao amin'ny akademian'ny Fanatontosana zavakanto ao Hong Kong, tamin'ny Quartz .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/01/02/130607/
 hivoaka ao Taiwan: https://www.hongkongfp.com/2018/11/09/ma-jians-china-dream-published-taiwan-book-talk-cancelled-hong-kong/
 mpivaro-boky dimy tao Hong Kong no nanjavona: https://globalvoices.org/2016/06/17/hong-kong-bookseller-says-he-was-forced-to-confess-on-tv-during-eight-month-detention-in-china/
 Mbola voatazona hatramin'izao fotoana izao: https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/07/eu-china-summit-secure-the-release-of-human-rights-defenders/
 hanafoana ny famandrihana: https://coconuts.co/hongkong/news/exiled-chinese-author-ma-jian-has-planned-hk-talk-canceled-by-local-venue/
 novaina indray ny fanapahan-kevitra: https://www.festival.org.hk/press-release-9-november-2018/
 “fihetsika fanivanantena”: https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/hong-kong/article/2173002/ma-jian-fiasco-shows-why-hong-kong-must-defend-its
 ho an'i Shina: https://en.wikipedia.org/wiki/Handover_of_Hong_Kong
 ny “tsipika mena”: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/2100895/president-xi-jinping-marks-red-line-warning-hong-kong
 ny mampiatrano resaka momba ny fahaleovantenan'i Hong Kong: https://advox.globalvoices.org/2018/08/11/condemnation-of-independence-activist-draws-a-red-line-for-hong-kongs-press-freedom/
 tratran'ny fandavana visa hiasana: https://www.hongkongfp.com/2018/10/10/chinese-media-mum-victor-mallet-visa-denial-case/
 mpanoratra no nitsoka nankany Hong Kong: https://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1867&context=iwp_archive
 Nifindra nankany Hong Kong i Cha tamin'ny taona 1949: https://www.newyorker.com/books/page-turner/the-gripping-stories-and-political-allegories-of-chinas-best-selling-author
 Nanafoana ny fanombohana fampirantiana mandeha singany: https://advox.globalvoices.org/2018/11/06/political-cartoonist-badiucao-abruptly-cancelled-his-hong-kong-exhibition-and-then-went-silent/
 tamin'ny Hong Kong Free Press: https://www.hongkongfp.com/2018/11/04/badiucao-interview-i-think-witnessing-dying-hong-kong/
 Nanjavona tsy hita tany amin'ny teathra: https://qz.com/615831/the-most-successful-movie-made-in-hong-kong-in-years-has-been-pulled-from-theaters/
 revolisiona elo tamin'ny taona 2014: https://globalvoices.org/specialcoverage/2015-special-coverage/hong-kongs-umbrella-revolution/
 tamin'ny Quartz: https://www.scmp.com/news/hong-kong/politics/article/1970383/lancome-stores-reopen-across-hong-kong-denise-ho-warns